Xildhibaan Khadiija Diiriye oo guusha Orodyahan Cabdullaahi Jaamac ku tilmaantay mid guul ka weyn – Kalfadhi
Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha, Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa guul weyn ka weyn guul oo ay Soomaaliya gaartay ku tilmaantay guushii ugu sareysay oo uu Cabdullaahi Jaamac Maxamed kasoo hooyey Kulan Orod ahaa, oo shalay ka dhacay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, halkaas oo sidoo kale Cabdisalaan Maxamed Axmed, oo Soomaaliya matalayey, uu isna ku guuleystay Kaalinta Orodka 800 Mitir.
Kulanka, oo ay ka qeybgalayeen 50 cayaartooy oo ka kala socday 15 dal, ayaa Cabdullaahi Maxamed Jaamac waxa uu ku guuleystay orodka ugu dheeraa ee 1500 Mitir. “Maashaa Allaah, tani guul ka weyn. Alxamdulillaah Rabul-Caalamiin – Soomaaliya ha noolaato” ayey Xildhibaan Khadiija, Wasiirka Cayaaraha iyo Dhalinyarada, ku tiri dhigaal ay kusoo qortay Feysbuuggeeda.
Xildhibaannaddu waxay sheegtay in aysan guushaasi ahayn uun mid u soo hoyatay Soomaaliya oo kaliya ee ay tahay mid ay wada gaartay Soomaalida oo dhan. “Tani waa guul u soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed” ayey ku tiri dhigaalkeeda, iyada si aad ah u muujineysa farxadda ay gelisay guusha Cabdullaahi iyo Cabdisalaan.
Khadiijo waxay, Xukuumadda Soomaaliya kasakow, bogaadisay Xiriirka Cayaaraha Fudud ee Qaranka, iyadoo u hambalyeyneysa dhalinyarada Soomaaliya ku mataleysay kulankaas orodka ahaa ee ay Soomaaliya ka soo hoysay guusha 1-aad, oo loogu magac-daray “Kulanka Jabuuti”. “Hambalyo; guuleysta markale, Iinshaa Allaah” ayey tiri Xildhibaannaddu.
“Waxaan rajeyneynaa kaalmahaan iyo kaalmo ka fiican iyo bilado ka fiican inaan soo hooyno” ayuu yiri Cabdullaahi Jaamac Maxamed, oo u warramayey VOA-da. Waxa uu sheegay inuu jecel yahay, kuna dadaali doono inuu ka muuqdo Olambikada iyo Jaambiyoonada Aduunka, si uu Soomaaliya u bilo. Dhinaca kale, dhamaan kaalmaha kale ee cayaarta ay Soomaaliya guushaas kasoo hoysay waxaa ku guuleystay ciyaaryahanadii ka socday Jabuuti.